တိတ်တခိုး | PoemsCorner
အသံတွေက ဆွံ,အ လို့။
နှင်းဆီနက် (19th Nov 2011-11:22PM)
In: ကဗျာ Posted By: blackrose Date: Nov 20, 2011
Leave comment3Comments & 247 views
By: SoFarAwayFromU at Nov 20, 2011
_*ဟိတ် ~ ဟိုကောင်လေး ခုချက်ချင်းရပ်စမ်း!! အမယ် ~ ငါ့အသည်းကိုများ ဓားနဲ့လှီးဆော့နေသေးတယ် . နာတော့မယ်~!! အောင်မာ .. ဘုရှိုးလာရှိုးမနေနဲ့!!! နင့်လက်ဓားရှမှာစိုးလို့ တားနေတာ ~ ဟွန်.*_အဲ့လောက်ထိ-နင့်ကိုချစ်တာ
By: မြတ်သက်မှူးခင် at Nov 22, 2011
_*ဟိတ် ~ ဟိုကောင်လေး ခုချက်ချင်းရပ်စမ်း!! အမယ် ~ ငါ့အသည်းကိုများ ဓားနဲ့လှီးဆော့နေသေးတယ် . နာတော့မယ်~!! အောင်မာ .. ဘုရှိုးလာရှိုးမနေနဲ့!!! နင့်လက်ဓားရှမှာစိုးလို့ တားနေတာ ~ ဟွန်.*_အဲ့လောက်ထိ-နင့်ကိုချစ်တာလေ